Kedu ihe bụ ikike gị dịka onye nwe ụlọ? | Law & More B.V.
blog » Kedu ihe bụ ikike gị dị ka onye nwe ụlọ?
Kedu ihe bụ ikike gị dị ka onye nwe ụlọ?
Onye ọ bụla nwere ụlọ nwere ikike nwere ikike abụọ dị mkpa: ikike ịnụ ụtọ ndụ na ikike ịgbazite nchedo. Ebee ka anyị tụlere ikike izizi nke onye nwe ụlọ n'ihe metụtara ọrụ dịịrị onye nwe ụlọ, ikike nke abụọ nke onye bi na ụlọ wee na a iche iche blog banyere mgbazinye nchedo. Ọ bụ ya mere a ga - eji tụlee ajụjụ ọzọ na - adọrọ mmasị na blọọgụ a: olee ikike ndị ọzọ onye nwe ụlọ nwere? Ikike ikpori ndụ ibi na ikike ịgbazinye ego abụghị naanị ikike onye nwe ụlọ nwere megide onye nwe ụlọ. Dịka ọmụmaatụ, onye nwe ụlọ ahụ nwekwara ikike nke ikike dị iche iche maka nnyefe nke ihe onwunwe ahụ nke na-anaghị agafe mgbazinye na inyefe ya. A na-atụle ikike abụọ a n'usoro na blọọgụ a.
Nyefee ihe onwunwe ahụ anaghị agafe mgbazinye
Paragraf nke 1 nke edemede 7: 226 nke Dutch Civil Code, nke metụtara ndị nwe ụlọ na oghere azụmahịa, kwuru ihe ndị a:
"Transfernyefe ngwongwo nke nkwekọrịta ụlọ ahụ metụtara (…) nke onye nwe ụlọ na-enyefe ikike na ọrụ nke onye nwe ụlọ site na nkwekọrịta ụlọ ahụ na onye nwe ya. "
Maka onye nwe ụlọ ahụ, edemede a pụtara na nke mbụ na ịnyefe ikike nke ihe mgbazinye, dịka ọmụmaatụ site na ire nke onye nwe ụlọ na onye ọzọ, anaghị akwụsị nkwekọrịta mgbazinye. Na mgbakwunye, onye nwe ụlọ ahụ nwere ike ikwupụta ebubo megide onye nọchiri ya na onye nwe ụlọ, ugbu a onye nọchiri anya iwu a nwere ikike na ọrụ nke onye nwe ụlọ. Maka ajụjụ nke na-azọrọ kpọmkwem onye nwe ụlọ ahụ nwere, ọ dị mkpa iburu ụzọ chọpụta ikike na ọrụ nke onye nwe ụlọ na-enyefe onye nọchiri ya. Dịka paragraf nke 3 nke edemede 7: 226 nke Code Civil, ndị a bụ ọkachasị ikike na ọrụ nke onye nwe ụlọ metụtara metụtara ojiji nke ihe mgbazinye iji tụlee ka onye nwe ụlọ kwụrụ, ya bụ, ego mgbazinye. Nke a pụtara na nkwupụta nke onye nwe ụlọ nwere ike ime megide onye na-anọchi ya na onye nwe ụlọ, na ụkpụrụ, metụtara ikike ya abụọ kachasị mkpa: ikike ịnụ ụtọ ibi na ikike ịgbazinye ego.
Ọtụtụ mgbe, ndị nwe ụlọ na onye nwe ụlọ ahụ na-emekwa nkwekọrịta ndị ọzọ na nkwekọrịta mgbazinye n'ihe banyere ọdịnaya ndị ọzọ ma dekọọ ha na nkebi ahịrịokwu. Ihe omuma atu zuru oke bu nkebiokwu gbasara ikike onye nwe ulo. N’agbanyeghi na o nyeghi onye nwe ulo ikike ibunye ya, o putara ibu oru nke onye nwe ulo inye: onye nwe ulo ga ebu uzo nye onye nwe ulo ihe a gbazitere ka ere ya nye onye ozo tupu ere ya nye onye ozo nochiri anya ya. Ndi nwe ulo ozo ma ogha n’iru ighari ndi nwe ulo? N'iburu iwu ikpe ahụ, nke a abụghị ikpe. Nke a nyere na ikike izizi nke onye nwe ụlọ enweghị ihe jikọrọ ya na mgbazinye ụlọ, nke mere na nkebi ahụ gbasara ikike ịzụta nke ihe mgbazinye anaghị enyefe onye na-anọchi iwu nke onye nwe ụlọ ahụ. Nke a dị iche naanị ma ọ bụrụ na ọ metụtara nhọrọ nzụta n'aka onye nwe ụlọ ahụ na ego a ga-akwụ kwa oge na onye nwe ụlọ gụnyekwara mmezi nke ịkwụ ụgwọ maka nnweta kachasị.
Obere obere akpa
Na mgbakwunye, Nkeji edemede 7: 227 nke Civil Code kwuru ihe ndị a metụtara ikike nke onye nwe ụlọ:
“E nyere onye nwe ụlọ ahụ ikike inye onye ọzọ ihe onwunwe ahụ a gbazitere iji ya mee ihe, n'ozuzu ma ọ bụ n'akụkụ ya, ọ gwụla ma ọ ga-eche na onye nwe ụlọ ahụ ga-ajụ ihe onye ọzọ na-eme.”
Na mkpokọta, o doro anya site n’isiokwu a na onye nwe ụlọ nwere ikike ịkwụnye ihe ọzọ ma ọ bụ akụkụ ụfọdụ nke ihe mgbazinye ahụ n’aka onye ọzọ. N'iburu akụkụ nke abụọ nke edemede 7: 227 nke Code Civil, onye nwe ụlọ enweghị ike ịga n'ihu na-aga n'ihu ma ọ bụrụ na o nwere ihe mere ọ ga-eji chee na onye nwe ụlọ ga-ajụ nke a. Oge ụfọdụ, ọjụjụ onye nwe ụlọ ahụ gosipụtara doro anya, dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na etinyere mmachibido iwu mgbazinye na nkwekọrịta mgbazinye. N’ọnọdụ ahụ, anaghị ekwe ka onye nwe ụlọ were ya binyere ya. Ọ bụrụ na onye nwe ụlọ ahụ mee nke a otu a, enwere ike ịkwụ ụgwọ na nkwụghachi. A ga - ejikọrịrị ezi a na mmachi na ịnyefe ụlọ na nkwekọrịta mgbazinye ma bụrụ nke a ga - ejedebe na oke ego. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike machibido ụlọ nke Air B&B n'ụzọ dị otú a na mgbazinye ego, nke na-abụkarị ikpe.
N’ebe a, edemede 7: 244 nke Code Civil dịkwa mkpa maka ịtọhapụ ebe obibi, nke na-ekwu na ekweghị ka onye bi ebe ahụ gbazite ebe obibi niile. Nke a anaghị emetụta akụkụ nke ebe obibi, dịka ime ụlọ. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, onye nwe ụlọ nweere onwe ya iji aka ya kenye onye ọzọ ebe obibi. Na ụkpụrụ, subtenant nwekwara ikike ịnọrọ na ụlọ a gbazitere. Nke a metụtakwara ma ọ bụrụ na onye nwe ụlọ ahụ hapụ ụlọ ya gbazitere n'onwe ya. A sị ka e kwuwe, Nkeji edemede 7: 269 nke Dutch Civil Code na-enye na onye nwe ụlọ ga-anọgide na-enyefe ya site na ọrụ nke iwu, ọbụlagodi na nkwekọrịta mgbazinye bụ isi agwụla. Agbanyeghị, a ga-emerịrị ọnọdụ ndị a maka ebumnuche nke edemede a:
Ohere obibi nke onwe. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ebe obibi nwere nnweta onwe ya yana ụlọ ọrụ ya dị mkpa, dị ka kichin na ime ụlọ ịwụ. Naanị ime ụlọ anaghị ahụ ka ebe obibi kwụụrụ onwe ya.
Nkwenye ntinye. Beingbụ nkwekọrịta dị n'etiti onye nwe ụlọ na onye na-ahụ maka ihe ahụ mezuru ihe achọrọ maka nkwekọrịta mgbazinye, dị ka akọwara ya na Nkeji edemede 7: 201 nke Code Civil.
Nkwekọrịta mgbazinye metụtara mgbazinye ebe obibi. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, nkwekọrịta mgbazinye isi nke dị n’etiti onye nwe ụlọ na onye nwe ụlọ ga-enwerịrị nke mgbazinye na mgbazinye nke ohere nke usoro oghere iwu ga-adị.
Ọ bụrụ na edozighi ihe ndị ahụ dị n'elu, onye na-ahụ maka ọrụ ahụ enweghị ikike ma ọ bụ aha ọ bụla iji rịọ n'aka onye nwe ụlọ ikike ịnọrọ na ụlọ a gbazitere mgbe emechara nkwekọrịta mgbazinye dị n'etiti onye nwe ụlọ na onye nwe ụlọ ahụ, ka nchụpụ ahụ dịkwa nke a na-apụghị izere ezere maka ya. Ọ bụrụ na ndị na-agba ume imezu ihe ndị a, ọ ga-eburu n'uche n'eziokwu na onye nwe ụlọ nwere ike ibido usoro ịgba akwụkwọ megide onye ahụ na-edo onwe ya mgbe ọnwa isii gachara iji weta nkwụsị nke ịtọpụ na mwepụ nke let.
Dịka oghere obibi, ohere azụmaahịa nwekwara ike ịgba onye nwe ya. Ma olee otu onye na-esote ya nwere si nwee ya na onye nwe ụlọ na nke a, ma ọ bụrụ na enyeghị onye nwe ụlọ ikike ime ya ma ọ bụ hapụ ụlọ ahụ gbazitere? Maka afọ 2003 enwere ọdịiche doro anya: onye nwe ụlọ enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na onye nwe ya n'ihi na onye nwe ụlọ ahụ nwere mmekọrịta iwu na onye nwe ụlọ ahụ. N'ihi ya, subten enweghịkwa ikike ma si otú a na-azọrọ onye nwe ụlọ ahụ. Kemgbe ahụ, iwu agbanweela na nke a ma kwuo na ọ bụrụ na nkwekọrịta mgbazinye kachasị n'etiti onye nwe ụlọ na onye nwe ụlọ na-akwụsị, onye nwe ụlọ ahụ ga-elebara ọdịmma na ọnọdụ nke onye nwe ya anya, dịka ọmụmaatụ, isonye onye na-esote ya na usoro ya onye nwe ulo. Ma ọ bụrụ na nkwekọrịta mgbazinye bụ isi ka akwụsịla mgbe emesịrị ya, ikike nke subtenant ga-akwụsịkwa.
You bụ onye nwe ụlọ ma ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara blọọgụ a? Mgbe ahụ kpọtụrụ Law & More. Ndị ọkàiwu anyị bụ ọkachamara n'ọhịa nke iwu ịgbazinye ma nwee obi ụtọ inye gị ndụmọdụ. Ha nwekwara ike inyere gị aka na iwu ma ọ bụrụ na esemokwu mgbazinye gị ebute na usoro ikpe.
Previous Post Mgbazinye
Next Post Onye ọlụlụ gara nke ọma nwere mmezi achọghị ịrụ ọrụ